कोरियामा अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थीहरुको प्रमुख कठीनाई भाषा
प्रकाश धमला । ज्यामरुङ-९, धादिङमा सन् १९८३ मा जन्मेका उनले धादिङबाटै माध्यामिक स्तरको शिक्षा हासिल गरेका थिए । सन् २००३ मा दक्षिण कोरियाली भूमिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहिलो पटक पाईला टेकेका थिए । दक्षिण कोरियाको नम्बर १ युनिभर्सिटी मानिने सउल नेशनल युनिभर्सिटीबाट उनले क्रमश अन्डर ग्रेजुएट र मास्टर्सको अध्ययन पूरा गर्दै हाल Epidemiology (महामारी बिज्ञान) बिषयमा P.hD. गरिरहेका उनले सन् २०१० मा कोरियाको शिक्षा मन्त्रालयबाट मानार्थ शिक्षादूतको उपाधी समेत पाएका थिए।
अध्ययन संगसंगै कोरियाका बिभिन्न नेपाली तथा कोरियन संघसंस्थाहरुसंग सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएका उनी १ बर्ष अगाडी दक्षिण कोरिया स्थित नेपाली बिद्यार्थीहरुको साझा संस्था नेपाली बिद्यार्थी समाज दक्षिण कोरिया (SONSIK) का अध्यक्ष भएका थिए । यस संस्थाको साधारण सभा यहि आउंदो अगष्ट १३ र १४ का दिन हुंदै छ । यहि प्रसंगमा वहाँसंग नेपाल कोरिया न्युजले लिएको अन्तरवार्ता यहाँ राखिएको छ ।
कसरी सोन्सिकको अध्यक्ष हुनुभयो?
म एक विधार्थीको नाताले विधार्थीहरुको एकमात्र संस्था सोन्सिकलाई स्थापनाकालदेखि नै नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको थिएं। प्रत्यक्ष रुपमा अन्डरग्रयाजुयेट पढ्दै गरेको बेला चौथो अधिवेशनमा भाग लिन जांदा सचिव पदको जिम्मेवारी लिने अवसर पाएं। त्यसपछि संस्थामा रहेर काम गर्दै जादा उपाध्यक्ष हुदै अध्यक्ष सम्म हुने अवसर पाएको हुं।
सोन्सिकको बारेमा छोटो परिचय दिनुस् न?
सोन्सिक कोरियामा रहेका नेपाली विधार्थीहरुको साझा संस्था हो। कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विधार्थीहरुलाई एकबद्द गरी विधार्थी हक र हीतको लागि काम गर्ने उद्देश्यले आजभन्दा करिब ८ बर्ष अघि स्थापित नेपाली विधार्थीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो।
सोन्सिकको प्रमुख उद्देश्य के हो ?
कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विधार्थीहरु तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई समेट्दै एक आपसमा भावनात्मक अनि शैक्षिक ज्ञानको आदानप्रदानका साथ सदस्यहरुको बीचमा पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्दि गराउनको लागि सहज भूमिका निर्वाह गर्नु नै सोन्सिकको प्रमुख उद्देश्य हो। साथै कोरियामा अध्ययनको क्रममा नेपाली विधार्थीहरुले प्राप्त गरेका ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकास तथा अनुसन्धानमा योगदान पुर्याउनको लागि नेपाल र कोरिया बीचको दुइपक्षिय सम्बन्ध विस्तारमा विशेष भूमिका खेल्नु सोन्सिकको दिर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ। यसका अलावा कोरियामा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरु, विदेशी विधार्थीहरुलाई रेखदेख गर्ने कोरियाको सरकारी निकाय, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकायहरुसंग स्नेही सम्बन्ध राख्नु, कोरिया अध्ययन तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धि जानकारीहरु नेपाली विधार्थिहरुको माझ पुर्याउनु तथा कोरियामा रहेका नेपाली विधार्थीहरुको समस्यालाई संस्थागत रुपमा सम्बन्धित निकायमा पुर्याई समस्या निराकरणमा पहल गर्नु पनि सोन्सिकको उद्देश्य रहेको छ।
कोरियामा अध्ययन गरिरहेका बिद्यार्थीहरुको संख्या कति छ?
कोरियाको शिक्षा मन्त्रालयले मलाई दिएको जानकारी अनुसार हाल कोरियामा ४०० जनाको हाराहारीमा नेपाली विधार्थीहरु रहेका छन्। जसमा भाषा प्रशिक्षार्थी, रेगुलर विधार्थी, तथा सरकारी निकायबाट छात्रवृत्ति पाएर आएका कर्मचारीहरु पर्दछन्।
कोरियामा नेपाली विधार्थी के कस्ता बिषयहरुमा बढी अध्ययन गरिरहेका छन्?
विशेषगरी Biotechnologyको क्षेत्रमा अध्ययनरत नेपाली विधार्थीहरुको संख्या उल्लेख्य रेहेको छ। अधिकांस विधार्थीहरु Biochemistry, Nano-Science, Molecular Biology, Natural Science जस्ता विषयहरु अध्यन गरिरहेका छन्। Medicine, Engineering, Social Science, Fine Arts तथा Management तर्फ भने नेपाली विधार्थीहरुको संख्या न्यून रहेको छ। धेरै कम संख्यामा भाषा प्रशिक्षार्थी तथा केहि संख्यामा धार्मीक विषयमा अध्ययन गर्ने विधार्थीहरु पनि छन्।
दक्षिण कोरियामा डाक्टर पढ्नेहरुको संख्या कति छ?
मेरो जानकारीमा आएअनुसार कोरियामा जम्मा ३ जना नेपालीहरुले डाक्टर पढेका थिए। २ जना नेपाल फर्किसके भने १ जना (राजेश श्रेष्ठ) भने कोरियाकै हस्पिटलमा कार्यरत छन्। नेपाल तथा अन्य मुलुकमा डाक्टर पढेर यहां Masters/Ph.D. गरिरहेका विधार्थिहरु भएपनि हाल कोरियामै डाक्टर पढिरहेका विधार्थी भने कोहिपनि छैनन्।
सोन्सिकले कोरियाका सबै बिद्यार्थीहरुलाई समेट्न सकेको छ त ?
हामीले सकेसम्म कोरियामा भएका सबै विधार्थीहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं। तरपनि विभिन्न कारणहरुले कतिपय विधार्थीहरु सोन्सिकको सम्पर्कमा आउन नसकेको कुरा सत्य हो। कोरियामा नेपाली विधार्थीहरुको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा शायद आगामी दिनहरुमा पनि सोन्सिकको लागि यो एउटा महत्वपूर्ण चूनौतिको विषय हुन सक्छ। यसैको लागि हामीहरुले विधार्थीहरुको नाम संकलन गरेर Database बनाउने काम पनि गरिरहेका छौं। भौगोलिक रुपमा एक आपसमा छरिएर रहनु तथा विधार्थीहरुको कार्य व्यस्तताका कारणले सोन्सिकमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन केहि कठिनाईहरु भएपनि सबै विधार्थीहरुलाई समेट्नु सोन्सिकको प्रमुख एजेण्डा हो। अर्को कुरा सोन्सिक एउटा Voluntary Organizationभएकोले यसमा Involve हुन चाहने विधार्थी जो कोहिलाई पनि सोन्सिकको ढोका खुल्ला रहेको छ।
यसपालीको साधारण सभामा के तपाई फेरि नेतृत्व लिंदै हुनुहुन्छ कि?
अहिलेसम्म मैले नेतृत्वमा दोहोरिने सोच बनाएको छैन।
अबको नेतृत्व कसले गर्ला जस्तो छ?
त्यो त म कसरी भनौं? काम गर्न इच्छुक साथीहरु जो कोहिपनि आउन सक्छन्।
तपाईको कार्यकालमा के कति राम्रा कामहरु भएका छन्?
विशेषगरी सोन्सिकलाई नेपाली समुदाय, विधार्थी र कोरियन शैक्षिक तथा सरकारी निकायहरुको बीचमा चिनाउनको लागि प्रयास भएको छ। अर्को कुरा सोन्सिकको वेबसाइटमा व्यापक परिवर्तन गरी यसलाई सूचनामूखि बनाउदैं कोरिया अध्ययन र छात्रवृत्ति सम्बन्धि जानकारी तथा सोन्सिकका कार्यक्रमहरुको जानकारी वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने काम गरेका छौं। कार्यकालको प्रारम्भमा NRN कोरियासंग संयुक्त रुपमा नेपालमा खुल्ला विश्वविधालयको अवधारणा सम्बन्धि अन्तरकृया कार्यक्रम, इन्जिनियरिङ् क्याम्पस पुल्चोकबाट आएका प्राध्यापकरुसंग आइटीले नेपालको विकासमा खेल्नसक्ने भूमिका सम्बन्धि अन्तरकृया कार्यक्रम तथा पछिल्लो समयमा University of Liverpool का प्राध्यापक तथा NRN-UKका ICC प्रतिनिधि हेमराज शर्मा र कृषि क्याम्पस रामपुरका प्राध्यापक होम बहादुर बस्नेतसंग समसामयिक विषयमा एक अन्तरकृया कार्यक्रम गरि एक बर्षको बीचमा तीन ओटा अन्तरकृया कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौं। यसैगरी गएको फेब्रुरीमा कोरियाको प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था सामदोङ् इन्टरनेशनल र सोन्सिकको बीचमा आगामी दिनहरुमा साझेदारी गर्ने हेतुले दुइपक्षिय समझौंतापत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। केहि समय अघि मात्र असामयिक रुपमा मृत्यु भएका विधार्थी स्व. उज्वल अधिकारीको परिवारको सहयोगार्थ सोन्सिकको पहलमा उल्लेखनिय चन्दा संकलन भएको थियो। यसका अतिरिक्त सोन्सिक न्युजलेटरको प्रकासन तथा क्षेत्रिय रुपमा नेपालको कला, संस्कृतिलाई कोरियन समाजमा पहिचान गराउन सोन्सिकको तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भाग लिने काम भएका छन्। एक बर्षको छोटो अवधिमा योजना गरियका कामहरुमध्ये कतिपय कर्यन्वयन हुन नसकेपनि समग्रमा मेरो कार्यकालमा नेपाली तथा कोरियन समाजमा सोन्सिकको पहिचान तथा सोन्सिकको संस्थागत विकासको लागि काम गर्ने प्रयासहरु भएका छन्।
सोन्सिक र अन्य नेपाली संघसंस्थाहरुसंग के कतिको समन्वयहरु भएका छन्?
अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्रममा विधार्थिहरुको आफ्नै बाध्यता भएकाले नेपाली संघसंस्थाका कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि हुन नसकेपनि विगतमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सोन्सिकले कोरियामा रहेका नेपाली संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गर्दै आएको छ। विशेषगरि NRN कोरियासंग समन्वय गरि विभिन्न विषयमा अन्तरकृया कार्यक्रमहरुको आयोजना भएका छन्। दशै तथा तिहार मनाउने कार्यक्रमहरुमा पनि नेपाली सम्पर्क समिति लगायत अन्य संघ संस्थाहरुसंग समन्वय भएको थियो। सोन्सिकका कर्यक्रमहरुमा यहांका मुख्य संघ संस्थाहरुलाई निमन्त्रणा गरी पारस्परिक रुपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने पहलहरु पनि भएका छन्। मेरो आफ्नो कार्यकालमा पनि विभिन्न संघ संस्थाहरु र सोन्सिकमा रहेको ग्यापलाई सांघुर्याउने प्रयासहरु भएका छन्। विधार्थीहरुका व्यक्तिगत समस्या समाधानको लागि पनि यहांका नेपाली संघ संस्थाहरुबाट धेरै सहयोग भएका उदाहरणहरु छन्।
सोन्सिकले नेपालमा भएका बिद्यार्थीहरुको शिक्षाका लागि पनि केही गर्छन् कि?
नेपालमै अध्ययन गरिरहेका विधार्थीहरुको लागि चाहिं अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो कर्यक्रम गर्न सकेका छैनौ र पनि कोरियामा अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली विधार्थीहरुको हकमा भने कोरिया अध्ययनको लागि आवश्यक प्रकृया तथा छात्रवृत्तिका प्रोग्रामहरु सम्बन्धि सूचना तथा जानकारीहरु प्रदान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस्ता विषयमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जानकारी सोन्सिकको वेबसाइटमा उपलब्ध गराएका छौं। यसका साथै सोन्सिकको ब्रोसर नेपालमा रहेको कोरियन दुतावास तथा अन्य केहि शैक्षिक संस्थाहरुमा पुर्याउने काम पनि गरेका छौं। आगामि दिनहरुमा सोन्सिकको अल्मुनिसंग समन्वय गरेर नेपालमा अध्ययनरत विधार्थीहरुको लागि केहि प्रोग्रामहरु लैजान सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ।
सोन्सिकको साधारण सभा हुंदा नेपालको राजनैतिक प्यानल मार्फत नेतृत्व सुम्पिन जान्छ भन्छन् नि?
शायद त्यसो भन्नेहरुको गलत बुझाई हुनसक्छ। सोन्सिक विशुद्द गैर-राजनितीक संस्था हो र यसको नेतृत्वको लागि अहिलेसम्म राजनैतिक प्रभावमा परेर कुनै पनि प्यानल निर्माण भएको छैन। राजनितिक प्यानल मार्फत नेतृत्व सुम्पिने भए गत बर्ष म आफै निर्विरोध रुपमा निर्वाचित हुदैंन थिएं होला।